Akụkọ - Usoro zuru ezu maka ntinye IP adịghị - IP44, IP54, IP55, IP65, IP66, IPX4, IPX5, IPX7
O nwere ike ịbụ na ị hụla ngwaahịa nwere akara na ha ma ọ bụ na nkwakọ ngwaahịa ha, dị ka IP44, IP54, IP55 ma ọ bụ ndị ọzọ yiri ya. Ma ị maara ihe ihe ndị a pụtara? Ọfọn, nke a bụ koodu mba ụwa nke na-anọchite anya ọkwa nchedo ngwaahịa a maka ịbanye na ihe siri ike na mmiri mmiri. N'isiokwu a, anyị ga-akọwa ihe IP pụtara, otu esi agụ koodu ahụ ma kọwaa n'ụzọ zuru ezu ọkwa nchekwa dị iche iche.
IP Nyochaa Nyocha Chọrọ ịma ihe ọkwa IP na ngwaahịa gị pụtara? Jiri nyocha a ma ọ ga-egosipụta ọkwa nchebe.
Ngwaahịa nwere ọkwa IP00 anaghị echebe ya megide ihe siri ike ma anaghị echebe ya megide mmiri mmiri.
Kedu ihe nyocha IP pụtara? IP Rating pụtara Ingress Protection Rating (Nke a makwaara dị ka International Protection Marking) nke na-anọchite anya koodu nke onye nrụpụta kwesịrị ịkọwapụta ka onye ahịa wee mara ma ọ bụrụ na echekwara ngwaahịa a pụọ ​​na nnabata nke ihe siri ike ma ọ bụ mmiri mmiri. Ọnụọgụ ọnụọgụgụ na-enyere ndị mmadụ aka ilekọta ngwaahịa ha zụrụ nke ọma na ịma otu esi echekwa ha n'ọnọdụ kwesịrị ekwesị. Imirikiti ndị nrụpụta eletrọniki na-akọwapụta nkọwa dị mgbagwoju anya metụtara ngwaahịa ha, mana Rating IP ga-adị mfe nghọta ma ọ bụrụ na agwa ndị mmadụ maka ya. IP koodu bụ ngwa uzo nke nwere ike inyere onye ọ bụla aka ịzụta ngwaahịa dị mma karịa, na-enweghị ike iduhie ya site na jargon na nkọwa ndị edoghị anya. Nchedo Ingress bụ ọkwa dị mma mara ọkwa n'ụwa niile na onye ọ bụla nwere ike iji, n'agbanyeghị ọnọdụ ha. Emepụtara ụkpụrụ elektrọniks ndị a iji mee ka ndị mmadụ mara ike ọrụ mkpuchi ngwaahịa nwere, site na mmiri ruo na nchedo ihe siri ike. Koodu ahụ dị ka nke a: ụdị nkenke nke Ingress Protection, nke bụ IP, na-esote ọnụọgụ abụọ ma ọ bụ leta X. Nọmba mbụ na-anọchite anya nguzogide nke ihe ahụ megide ihe siri ike, ebe nke abụọ na-anọchite anya nchekwa enyere megide mmiri mmiri. Akwụkwọ ozi X na-egosi na a nwaleghị ngwaahịa ahụ maka ọdịiche dị iche iche (ma ọ bụ ihe siri ike ma ọ bụ mmiri mmiri). Ihe Nchedo Ihe siri ike Ihe nchebe eletrọniki megide ihe ndị siri ike na-ezo aka na ịnweta akụkụ dị egwu n'ime ngwaahịa ahụ. Ogologo a sitere na 0 ruo 6, ebe 0 pụtara enweghị nchebe ọ bụla. Ọ bụrụ na ngwaahịa a nwere nchedo ihe siri ike nke 1 ruo 4, a na-echebe ya megide ihe ndị karịrị 1mm, site na aka na mkpịsị aka ruo obere ngwaọrụ ma ọ bụ wires. Nchedo kacha nta akwadoro bụ ọkọlọtọ IP3X. Maka nchebe megide uzuzu, ngwaahịa a kwesịrị igosipụta opekata mpe ọkọlọtọ IP5X. Ingress nke ájá bụ isi ihe na-akpata mbibi n'ihe banyere eletrọniki, yabụ ọ bụrụ na a ga-eji ngwaahịa ahụ mee ihe na ebe uzuzu uzuzu, IP6X, nchebe kachasị sie ike, kwesịrị ịbụ mgbakwunye. A na-akpọkwa nke a nchedo intrusion. Ọ dị oke mkpa ịhọrọ Rating IP kacha mma maka ngwaahịa eletrọniki, ebe nke a na-emetụta nguzogide ngwaahịa a na kọntaktị eletrik ebubo, nke nwere ike ibute mmebi ngwaahịa n'oge. Igwe eletriki eletriki nke kpuchiri ihe nkiri polymeric dị nro na-eguzogide ọnọdụ gburugburu ebe obibi dị uzuzu oke.
0 - Enweghị nchedo
1 - O doro anya na ihe mkpuchi siri ike gafee ihe dịka 50mm (dịka aka).
2 - O doro anya na ihe mkpuchi siri ike gafere ihe dịka 12.5mm (dịka mkpịsị aka).
3 - O doro anya na a ga-echebe ihe siri ike karịa 2.5mm (dịka waya).
4 - O doro anya na ihe mkpuchi siri ike na ihe karịrị 1mm (dịka ngwaọrụ na obere wires).
5 - Echebe ya nke ukwuu nke ájá nwere ike igbochi nkịtị ọrụ nke ngwaahịa ma ọ bụghị n'ụzọ zuru ezu ájá uko. Nchedo zuru oke megide ihe siri ike.
6 - Uzuzu juputara na nchedo zuru oke megide ihe siri ike.
Liquids Ingress Nchedo Otu ihe a na-emekwa maka mmiri mmiri. Liquids Ingress Protection a makwaara dị ka nchedo mmiri na ụkpụrụ nwere ike ịchọta n'etiti 0 na 8. Agbakwunyela 9K ọzọ na nso nso a na koodu Nchedo Ingress. Dị ka ọ dị n'okwu ahụ edepụtara n'elu, 0 pụtara na ngwaahịa ahụ anaghị echebe n'ụzọ ọ bụla site na nsị nke mmiri mmiri n'ime ikpe ahụ. Ngwaahịa ndị na-enweghị mmiri agaghị egbochi ma ọ bụrụ na etinye ha n'okpuru mmiri ogologo oge. Igosi na obere mmiri zuru oke maka imebi ngwaahịa nwere ọnụego IP dị ala. O nwere ike ịbụ na ị hụla ngwaahịa nwere ọkwa dịka IPX4, IPX5 ma ọ bụ IPX7. Dịka e kwuru na mbụ, ọnụọgụ nke mbụ na-anọchite anya nchebe ihe siri ike mana ndị na-emepụta anaghị anwale ngwaahịa ha maka uzuzu uzuzu. Ọ bụ ya mere ọnụọgụ mbụ ji jiri X. dochie anya ya. Mana nke ahụ apụtaghị na ngwaahịa ahụ anaghị echebe ya pụọ ​​na uzuzu. Ọ bụrụ na ọ nwere ezigbo nchekwa nchekwa na mmiri, ọ ga - echedo ya pụọ ​​na ájá. N'ikpeazụ, ọnụahịa 9K na-ezo aka na ngwaahịa ndị nwere ike ihicha site na iji uzuoku ma na-akwado mmetụta nke ụgbọ elu mmiri dị elu, n'agbanyeghị agbanyeghị ntụziaka ha si. Dịka e kwuru na mbụ, maka ngwaahịa edepụtara dị ka IPXX, ọ nweghị nnwale a na-agba iji chọpụta ma ngwaahịa ndị ahụ ọ bụ mmiri na uzuzu ma ọ bụ adịghị. Ọ dị mkpa ịghọta na ọkwa XX apụtaghị na ngwaahịa ahụ anaghị echebe ma ọlị. Kpọtụrụ onye na-emepụta ihe ma na-agụ akwụkwọ ntuziaka onye ọrụ bụ iwu tupu ị tinye ngwaọrụ eletrọniki n'ọnọdụ pụrụ iche.
0 - Enweghị nchedo.
1 - Odoro mmesi obi ike na oke mmiri.
2 - Nchedo emeberela mmiri ihu mmiri mgbe ngwaahịa a na-agbada ruo 15 Celsius site na ọnọdụ ya.
3 - Nchedo emeberela megide sprays mmiri kpọmkwem n'akụkụ ọ bụla ruo 60 Celsius.
4 - Nchedo emebere megide mmiri na-agbapụ n'akụkụ ọ bụla.
5 - O doro anya na enwere ike igbochi mkpuchi ụgbọ mmiri (6.3mm) site n'akụkụ ọ bụla.
6 - O doro anya na enwere ike igbochi ụgbọelu dị ike (12.5mm) site n'akụkụ ọ bụla.
7 - Okwusi ike megide mmikpu mmiri na omimi n'etiti 15 cm na 1 mita nke kachasị 30 nkeji.
8 - O doro anya na a ga-egbochi nchebe nke ogologo oge nke mmiri mmiri na omimi nke ihe karịrị 1 mita.
9K - Nchebe emesiri obi ike megide nsonaazụ nke nnukwu mmiri jets na nhicha uzuoku.
Pụtara Of Commonfọdụ Common IP Ratings
IP44 —— Ngwaahịa nwere akara nke IP44 pụtara na a na-echebe ya megide ihe ndị siri ike karịa 1mm na mmiri na-agbapụta site n'akụkụ niile.
IP54 —— Ngwaahịa nwere akara IP54 na-echebe site na ntinye ájá zuru oke iji gbochie ngwaahịa ahụ na-arụ ọrụ nke ọma mana ọ bụghị uzuzu uzuzu. A na-echebe ngwaahịa a kpamkpam megide ihe ndị siri ike ma na-agbanye mmiri site n'akụkụ ọ bụla.
IP55 —— A na - echekwa ngwaahịa IP55 edepụtara ka ọ ghara ịbanye na ájá nke nwere ike ịbụ ihe na-emerụ ahụ maka arụmọrụ nke ngwaahịa ahụ mana ọ bụghị ntụ zuru oke. A na-echebe ya megide ihe ndị siri ike na mmiri jets na-atụgharị site na ihe omimi (6.3mm) site na ntụziaka ọ bụla.
IP65 —— Ọ bụrụ n ’ịhụ IP65 ka edere na ngwaahịa, nke a pụtara na ọ bụ uzuzu zuru oke ma chebe ya megide ihe siri ike. Plus ọ na-echebe megide mmiri jets na atumatu olu site nozulu (6.3mm) site ọ bụla n'akuku.
IP66 —— Ntụle nke IP66 pụtara na a na-echebe ngwaahịa a kpamkpam pụọ na uzuzu na ihe siri ike. Ọzọkwa, a na-echebe ngwaahịa ahụ site na ụgbọ mmiri dị ike nke ihe ọhụụ (12.5mm) gosipụtara site na ntụziaka ọ bụla.
IPX4 —— A na-echebe ngwaahịa IPX4 gosiri site na mmiri splashes site n'akụkụ ọ bụla.
IPX5 —— Ngwaahịa nwere akara nke IPX5 na-echebe site na jets mmiri nke a na-atụghị anya ya (6.3mm) site na ntụziaka ọ bụla.
IPX7 —— Ntụle nke IPX7 pụtara na ngwaahịa nwere ike ịmikpu n'ime mmiri ruo oge kachasị nke 30 nkeji na omimi n'etiti 15cm na 1m.